ကာလပေါ် ငရဲခွေးကြီးတွေ လွတ်နေသေး (U Win Tin) | MoeMaKa Burmese News & Media
တူမောင်ညို - ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ (ဗိုလ်) ဦးခင်အောင်မြင့် ပြောတာတွေကို ဆန်းစစ်ကြည့်ခြင်း
“ဖက်ဒရယ်အတု” သတိပြု (Tu Maung Nyo)
ဖိုးသံ (လူထု) - ဘိုလိုတော့ခ် ရောဂါ
အောင်ခိုင်မြင့် ● စစ်လေယာဉ်နဲ့ဗုံးကျဲပြီး တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေး တည်ဆောက်၍မရနိုင်ပါ
ဖိုးထက် - လောဘကြီးတဲ့ ဒီမိုကရေစီ
ထွန်းဝင်းငြိမ်း - ကျွန်ုပ်တို့သည် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ဖြစ်ကြသည်
ငြိမ်းချမ်းအေး - မြန်မာအမျိုးသမီးများနေ့နှင့် ဖခင်များရဲ့ တာဝန်
ဖိုးစီ (ရုံးတော) - မင်းစဉ် မင်းဆက် ယတြာ ကွက်များ
ထွန်းဝင်းငြိမ်း - ဦးကိုနီ၊ ၂၀၀၈ ဖျက်သိမ်းရေးနဲ့ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး
ကာလပေါ် ငရဲခွေးကြီးတွေ လွတ်နေသေး (U Win Tin)
ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင်၊ အောက်တိုဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၂
အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:သူတို့အာဘော်, ဦးဝင်းတင်
11 Responses to ကာလပေါ် ငရဲခွေးကြီးတွေ လွတ်နေသေး (U Win Tin)
မောင်ပျာလောင် on October 13, 2012 at 3:44 am
ထာဝရလေးစားအပ်ပါသော ဘဘကြီးဦးဝင်းတင်ခင်ဗျား “ကာလပေါ် ငရဲခွေးကြီးတွေ လွတ်နေသေးတယ်” ဆောင်းပါးကို ဖတ်ရပြီး စိတ်မကောင်း တော်တော်ဖြစ်မိတယ်၊ ထောက်လှန်းရေးတွေရဲ့ လုပ်ရပ်ဟာ လူ့ လုပ်ရပ်မဟုတ်ဖူး၊ တိရစ္ဆာန်တွေတောင် ဒီလိုမလုပ်ဖူး။ အလှဲ့ ကြုံလာရင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခုံရုံးကိုတင်စရာမလိုဘူး၊ အနောက်ဖက်လွန်မင်း တရာကြီးလက်ထက်က ငဇင်ကာလို တံကျင်လျှိုပြီးကားဇင်တင်ရမယ်။ အဘ ကတော့ “ကာလပေါ် ငရဲခွေးကြီးတွေ လွတ်နေသေးတယ်” လို့ ဆိုပေမဲ့၊ ကျနော့ အထင်ကတော့ – ချီးစားခွေး ပါစပ်ထဲက ချေးတွေကို၊ အဘက ချေမနဲ့ ကော်ထုပ်နေတယ် – လိုခံစားမိပါတယ်။ သနလွန်းလို့ အဘချေမတွေ ရေသန့် ဘူးကရေနဲ့ ကော၊
နွားနို့တွေနဲ့ ပါဆေးပစ်ပါ။ စိတ်မှာခံစားရလွန်းလို့ ရေးမိတာပါ၊ ရိုင်းတယ်ထင်ရင် ကန်တော့ပြီးတောင်ပန်ပါတယ်၊ သူတို့ နဲ့ တန်တဲ့ စကားလုံး ရှာမရတဲ့ အရိုင်းစပယ် – ရာ ကလေးပါ။ အဘသက်တော်ရာကျော်ရှည်ပါစေ – – –
pnawra on October 13, 2012 at 7:22 am
prison isacreation center said by Thi ta gu sayadaw U nya nissara.
Min Myo Naing on October 13, 2012 at 8:37 am
They took over power by force from the legitimate government in1962.
They killed thousands of students and demolished the historic building of Students Union in 7July 1962.
They crushed down thousands of student, monk and people in the 1988 nationwide Uprising.
They refused to handover power to the winning political party in 1990 elections.
They tried to assassinate Burma’s democracy icon and Nobel Peace laurete Daw Aung San Suu Kyi, U Tin Oo and some NLD members at Depeyin in 2003.
They become millionaires within 20 years though the country is in the category of poorest states in the world.
They still clinging to power after the Constitution was drawn up by themselves.
They let their own people hold the key positions both in the Cabinet and Parliament.
And now the military criminals are roaming in the civilized soil of the United States with triumphant smiles as if they are the savior of Burma.
Who are they? They are none other than the “Hell Hound At Large”. The organizations inside may have difficulties in taking action on those military dogs. Therefore, we who are staying outside the country have responsibility to start the campaigns. If we can achieve success in stopping Myitsone Projects why cannot we do away with the military regime in Burma. The battle is an uphill one. We can do it. Let’s do it now.
David on October 13, 2012 at 10:43 am
A Ba U Win Tin,
Very sad to read that,
I think not two generals only,
Also another gereral, Khin Nyunt included.
These three foxes have to go to hell
min htut on October 14, 2012 at 4:06 am
i am agree with you .espacialy khin nyunt.
a on October 13, 2012 at 6:01 pm
Maung Ngwwe on October 13, 2012 at 8:08 pm
Those general must be go to ICC.
barton on October 13, 2012 at 8:56 pm
အမိန်.ပေးသူနဲ.နာခံသူ စစ်ဘက်ဝန်ထမ်း ၊ရဲဝန်ထမ်း ၊ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်း ၊အရပ်ဘက်အဖွဲ.အစည်းများ သတင်းပေးများ အားလုံးပူးပေါင်းပြီးလူ.အခွင်.အရေးချိုးဖေါက်ခဲ.ကြတာ။အဲဒီ ငရဲခွေးဝဲစားတွေကို ၂၀၀၈ ဥပဒေက လွှတ်ပေးထားတယ်။လက်ရှိအစိုးရအဖွဲ.၀င်များ .ကြံ.ဖွတ်အမတ်များ နဲ.တမတ်တန်များကလည်းယခုထိကာကွယ်ပေးနေဆဲပါဗျား ..။
Min Chitea on October 14, 2012 at 6:53 am
BABA U Win Tin, I’m really proud of you. This message is for EX General U Than Shwe and U Khin Nyunt, ” You will be treated, the way you treat others “. ” င၇ဲအပ ဝတ်အမြဲ”. Ex General Khin Nyunt killed Ex Major Ba Thaw (a) Maung Thaw Ka
. The Ex General U Than Shwe’s mentality are lower than Dog’s mentality. Did you watch BBC hard talk with U THEIN SEIN. He did not apologize / admit. He has no regrets about what his boss U Than Shwe did to our Burmese people. But U Thein Sein has good leadership ability. ” Good leadership may be defined as to tell LIES in the face ofenemy “. Who is ” ကာလပေါ်င၇ဲခွေးကြီး? “. ” Modern Hound still at Large”.
Nyo88 on October 14, 2012 at 4:15 pm
ဆရာကြီးဦးဝင်းတင် သဘောထားကို အပြည့်အ၀ထောက်ခံပါတယ်။ ထပ်ပြီးပြောချင်တာက အညတရနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေထောင်ထဲမှာ ရှိနေတုန်းပါ အဲဒါကို အဘဦးဝင်းတင်က မမေ့မလျော့ပဲ ဆောင်းပါးထဲ ထည့်ရေးထားတာ အင်မတန်ကျေနပ်စရာကောင်းပါတယ်။ ဆိုရေးရှိက ဆိုအပ်စွ ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း အဘဦးဝင်းတင်ကတော့ ပြောဆိုလိုက်ပါပြီ။ ကျမတို့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ အားလုံးကလည်း ၀ိုင်းဝန်းပြောဆိုနေကြပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ အားမရတာကတော့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း အီလိုက်တွေကိုပါပဲ၊ အဲဒီကိစ္စလည်း အဘဆက်ပြောပေးပါဦး။
meengehnin on October 14, 2012 at 8:34 pm
မျိုးဆက်သစ်တို.အတွက် ကျောင်းသုံးမြန်မာစကားပြေစာအုပ်တွင်ထည်.သွင်းပြဌာန်းသင်.သော သင်ခန်းစာတပုဒ် ပါ။
လောကကောင်းကျိုးကိုသာဆောင်ရွက်ခဲ. ဆောင်ရွက်နေဆဲဖြစ်သော ဆရာုကီး၏ကုသိုလ်ကံစေတနာတို.ေုကာင်. နောင်ဘဝဆက်တိုင်း ဆင်းရဲကင်ူးပီး ကောင်ကျိုးမင်္ဂလာအပေါင်းနှင်.သာ